Dhaanto - Wikipedia
Dhaanto waa Ciyaar Dhaqameed, waxay ka mid tahay Ciyaaraha Hidaha iyo Dhaqanka Soomaaliyeed. Ciyaartu waa mid ka mid ah ciyaaraha waana kuwa ugu caansan ciyaaraha hidaha somalida
Dhaantada waxaa asal ahaan laga dheelaa gobolada Deegaanka soomaalida gaar ahana waxaa si gooni ugu caanbaxay ciyaartaan qabilada Absamaha kuwooda degga degaanka soomlida itobiya
iminka gumaysiga itoobiga hoos taga, waxaase laga dheelaa guud ahaan dalkeenoo idil. Dhaantadu way noocya badantahay. Badanaa noocyadaa kala duwan waxaa laga ciyaaraa dhulkeeni gaar ahaan miyiga. Ciyaarta dhaantada waxaa ciyaara dumar iyo ragba.
Geyiga Soomaaliyeed waa dhul hodan ku ah waxyaa badan waxaana la qiray in uu ku caan yahay suugaanta ha ahaato gabay iyo murti kalaba. Geyiga Soomaaliyeed ama arlada Soomaali waa dhulka Soomaali lagu yaqaan daaq geel iyo dhirta uu geela jecelyahay laga helo geeska Afrika dhul ku yaal oo baaxad leh.ciyaaraha dhaantada waa ciyaaraha ugu qaalisan ee lugu jecel yahay meelo badan oo ka mida soomalida .iyagoo dhanteeya xiliyada farxadaha si u muujiyaan dareenkooda farxadeed oo isula qaybsaadan farxada raareenta.sidoo kale waxay ciyaari jireen ciyaarta dhaantada,xiliyada xafladaha aroosyada xiliyada guulaha,markaa ciyaarta dhaantadu waa ciyaar aad loo jecal yahay,dad badanina aay maanta xiiseyaan ciyaaraha dhaantada.waxaana wakhtigan la joogo casriyeey faanin da,yar oo uu ka mid fanaanka -'(cali dhaanto) iyo axmed budul oo kamid da,a,yarta soo kacday ee cusboonisisay dhaantidii ay caanka ku ahayd soomalida
Madadaalada Dhaqanka Miyiga[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Baryihii hore maadaama reer miyi loo badnaa waxay dadku tumaan jireen gurbaano/durbaan oo ilaa iminka reer guuraagu tuntaan iyo mararka qaar magaalooyinka dalkeeni. Qurbahase badanaa waxaa loo bedelay muusiko. Dhaanto, Saar oo uu ugu caansahay Goobile Saar Gedood, Buraanbur iyo ciyaaro kale oo badan ayaa la mid ah ah dhaantada dhulkeena.
Waxay abaanada/fannaaniinta soomaaliyeed qaadeen heeso aad u badan oo dhaanto ah. Waxay isugu jiraan kuwa wadani ah oo kuwa dhaqankeena suubban ka turjuma iyo waliba kuwa dhinaca haasaawaha ama dhanka jacaylka ah. Dugsiyada dhexe iyo hoose ayaa inta badan lagu soo bandhigaa gabayada, dhaantada, buraaburka iwm.
Fanka Soomaaliyeed iyo Dhaantada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Fannaaniinta qaada dhaantada aad bay u fara badan yihiin oo waxaanba dhihi karaa dhammaan fannaaniita soomaaliyeed badankood way qaadeen hees dhaanta ah. Waxaanse iminka tusaale ahaan u soo qabanayaa fannaanka weyn marna ah abwaanka soomaaliyeed cali dhaanto iyo Maxamuud A Cumar Jaango.
Abwaan Jaango wuxuu ku luuqeeyaa dhaantada, wuxuuna qaaday heesa aad u fara badan oo dhaanta ah. Waxay badankood u badanyihiin wadani iyo dhaqan, dhanka jacaylkana kama marna.sidoo kale waxaa kamid cali dhaanto iyo axmed budul oo imika soo saara dhaantooyin aad loo jeclaysto oo dhalin badan ay aad u xiseeyan dhantooyinkaas
Dhaantada ayaa sanadahan Danbe si wayn u noqotay mid ka mid ah kuwa loogu jelecyahay loogana daawashada badan yahay maadaama ay la soo baxday wajiya cusub iyo isbedel dhanka Dadka Dhaylo Ciyaartan Waayihii hore dhaantada waxaa lagu dhayli jiray oo kali ah Miyaga Balse hada waxay ka mid noqotay Tartamada Fanka iyo Suugaanta iyadoo Xiiso Gaar ah yeelatay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhaanto&oldid=170459"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2017, marka ee eheed 15:54.